N'ogbe Soy wax iko esi ísì ụtọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emepụta | Mmeri
soy wax kandụl
Soy wax iko esi ísì ụtọ kandụl
A na-eji kandụl soy anyị na soy wax, na-ere ọkụ ma na-enweghị anwụrụ ọkụ ojii, ahụike, na-adịghị emerụ ahụ mmadụ. Dị iche iche nke kandụl na-esi ísì ụtọ, kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ọ bụla. Ọzọkwa iko ite bụ odi mfe na obere iji. Anyị na-enye ODM OEM ọrụ ndị ahịa.
Size: Diamita6.2cm * Elu7.6cm
Obere nke soy wax iko esi ísì ụtọ kandụl
Soy wax iko esi ísì ụtọ kandụl na elu mma, logo na size nwere ike ahaziri. Ọzọkwa nye sample ọrụ.
Kandụl Soy na-esi ísì ụtọ Ọ bụghị naanị ume ikuku kamakwa ọ na-eme ka akwara dị jụụ ma belata nchekasị. Enwere ike iji ya maka ehighị ụra nke ọma, mgbasa ozi, iwepụ ihe ndị na-esi ísì, wdg. Ọgaranya na-esi ísì ụtọ na-adịte aka na-eme ka ahụ ruo gị ala.
Ihe onwunwe Akpụkpọ anụ iko + soy wax + mkpuchi ọla
Nha D6.3cm * H7.6cm
Oge oku 16hours
Wax arọ 90g
Mkpokọta nha 245g
Nke gara aga: 7,8 inch elu Paraffin wax kọlụm kandụl
Osote: transperent iko-esi ísì ụtọ kandụl
Kandụl Soy Wax
Soy kandụl Wax
Soy Wax N'ihi Kandụl Ndinam
Soy Wax Maka Kandụl
onwe labelụ esi ísì ụtọ mini kandụl
Mịrị ifuru pụrụ iche imewe iko jel wax fragra ...
Embossed iko ite soybean wax kandụl
transperent iko-esi ísì ụtọ kandụl